FJKM Ankadifotsy Fandraisan-tànana / Zanaka ampielezana / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Ny Alahady 21 Mey 2017 lasa teo no nanokanana ireo nahavita ny fianarany tamin'ny SEFALA tany amin'ny FJKM telotrano tany Canada. Ny FJKM Québec, FJKM Montréal ary FJKM Ottawa no mandrafitra ny FJKM telo trano any Canada.
10 mianadahy izy ireo, ka ny 9 natokana ho mpitoriteny ary ny 1 Katekista izay Ramarolahy José sylvain zanaky ny FJKM Ankadifotsy. 5 mianadahy no avy amin'ny FJKM Québec ary 5 kosa avy ao amin'ny FJKM Montréal. Nandritra ny Tafika Masina no tanterahina tany amin'ny tananan'ny Ottawa sy Gatineau no nanaovana ny fanokanana. Ny mpampianatra azy ireo dia ny Mpitandrina Perline Cooper, nandritra ny roa taona. Ny fianarana dia notanterahina en ligne nandritra izay 2 taona izay.
Hetsika vontosy Filazantsara ny Malagasy rehetra any Canada :
Ny Tafika Masina indray dia nanantanteraka ilay iraka lehibe hoe vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara, ny azy ireo kosa indray hoe: “ vontosy Filazantsara ny Malagasy rehetra”. Ny Sabotsy dia fanafiana isan-tokatranon'ny Malagasy izay nanaiky handray ny mpiantafika no natao. Ny alahady 21 mey kosa no sady famaranana ny Tafika Masina no fanokanana azy 10 mianadahy voalaza tetsy ambony.